Murankii Saylac oo Faraha ka Baxday, Muuse Biixi oo Dhiillo Hoggaaminaya, Djabouti oo Faraha la soo gashay, Ismaamulka Somalida Itoobiya oo aad Looga Dareemayo Gardarrada lagu hayo Beesha Gadabuursi, Xaaladda oo Dawladaha Jaarka Saamayn ku Yeelaatay. | AWDALSTATE.COM – The First and the Official
Murankii Saylac oo Faraha ka Baxday, Muuse Biixi oo Dhiillo Hoggaaminaya, Djabouti oo Faraha la soo gashay, Ismaamulka Somalida Itoobiya oo aad Looga Dareemayo Gardarrada lagu hayo Beesha Gadabuursi, Xaaladda oo Dawladaha Jaarka Saamayn ku Yeelaatay.	Posted on January 20, 2013
Awdalstate – Glasgow – Somaalida ayaa ku maah maahda Dhidar xabaala qode qudhun buu uga dhaadhacaa. Waxa taa la misaal ah halka ay rag u xadhko xidheen xaaladda la walaaqayo ee cirka lagu shareeray, ee la doonayo in dimuqraaddiyaddii doorashada lagu kala helay loo tarmujo xaalad qabaa’il. Waxana mashruucan hoggaaminaya shakhsiyaad uu ka mid yahay Muuse Biixi iyo Abiib Tima-cad oo hore ugu eedaysnaa dilalkii jidka Kala-baydh iyo xasuuqii Saameel jeelkana ku galay arrintaasi. Sida ay wararku sheegayaanna waxa immiga magaala xeebeedka Zaylac ku sii jeeda labadaa nin, oo mid ka mid ahi uu hore u yimid magaalada Borama isaga oo ka mid ahaa wafigii Hargeysa laga soo diray ee u socday in ay kursiga Meyerka u qaadaan beesha Ciise.
Illaa iyo usbuucanna waxa uu wasiirka gudaha dawladda Siilaanyo ku kala dhex jiray xildhibaannadii degaanka Zaylac u soo baxay, balse la isku diray. Sheeduna waxa ay maraysey Gadabuursow Meyerkii si sharci ah ayaad ugu guulaysateen, laakiin beesha Ciise ee dhulka inla deggan labada kursi mid siiya, oo weliba kursiga Meyerka siiya. Hase yeeshee, xubnaha beesha Samaroon waxa ay ku adkaysteen in aanay midna bixinayn, mar haddii ay doorasho xaq iyo xalaal ah ku heleen. Balse markii dambe waxa ay talo ka badin weydey in ay ku xigeenka Meyerka ugu yaboohaan beesha Ciise iyaga oo eegaya wax ay ku sheegeen raalli gelin iyo codsiga wasiirka.
Xalayna waxa isa soo tarayey in madaxweynaha Djabouti uu la kulmay odayo ka tirsan beesha Sacad Muuse iyo weliba madax ka tirsan ururkii Xaqsoor ee laga badiyey. Oo guddoomiyahoodii xilligan ku sugan yahay Djabouti isaga oo u tagey in uu booqdo dadkii lagu dhaawacay Zaylac ee immiga yaalla cusbatalka Djabouti. Kulammada uu Geelle la yeeshay odayada beelo ka mid ah beelaha Isaaq ayaa la sheegayaa in ay uga wada hadleen taariikhda Zaylac iyo sidii Meyerka magaalada amma ku xigeenka loo siin lahaa beesha Ciise, sidoo kale waxa ay ka wada hadleen, in saamiga beesha Ciise ee dawladda Somaliland loogu daro wasiir iyo mas’uulliyiin, waxa kale oo odayaasha Ciise ku baaneen in ay beesha Isaaq kala qayb galeen dagaalkii ahliga ahaa.
Maantana waxa magaalada Zaylac soo gaadhay madax ka tirsan dawladda Djabouti, taasina waxa ay layaab ku ridday sababta ay madaxdani u yimaaddeen magaala xeebeedka qadiimka ah ee Zaylac oo aan ka tirsanayn dalka Djabouti. Waxase cad in xoogaggii qarsoonaa ee mashaqada Zaylac ka dambeysey ay immiga isa soo caddeeyeen.
Dhinaca Itoobiya ayaa iyana aad looga dareemayaa shaqaaqada muranka ah ee ka taagan magaalada Zaylac. Magaalada Jig Jiga oo uu ku sugan yahay Ugaaska Gadabuursi ayaana dhawr jeer loola yimid Ugaaska in la warsado arrimaha ka socda Zaylac ee la iska bahaysanyo beeshiisa. Laakiin waxa uu dalbaday in horta la sugo sida ay u dhacdo. Hase yeeshee waxa immiga na soo gaadhaya in odayaal ka socda beelaha Absame iyo odayaal beesha Gadabuuri ahi ay ka biyo diidsan yihiin fara gelinta ay Djabouti ku hayso gobollada Awdal arrintaana si hoose isaga arkeen. Horena waxa xabsiga loo dhigay odayaal ka soo jeeda beesha Ciise oo magac ku leh magaalada Diridhaba oo hadallo colaada mariyey saxaafadda. Kuwaasi oo aannaan maqal in la sii daayey iyo in kale.
Magaalada Boramana waxa si xawliya uga socda, abaabul iyo kacdoon lagaga horjeedo fara gelinta aan sharciga ahayn ee lagu hayo, degaanka Zaylac. Inkasta oo ay odayada magaalada horfadhiga u ahi ay dareemayaan culays badan oo kaga imanaya dhinaca magaalada Hargeysa ee looga taliyo.
Qurba joogta gobollada Awdal, Gebilay iyo Salal ayaa iyaguna telefoonnada dhegta ku haya aadna uga xanaaqsan wararkan dhiillada hoggaaminaya ee marba marka ka dambaysa isa soo taraya.
Isku soo wada duuboo, waxa war joogaa marka Muuse Biixi iyo Abiib Tima Cad oo ka soo jeeda beesha Sacad Muuse ee Isaaq ay arrimahan faraha la galaan. Labadan nin oo loo malaynayo in ay iyagu iskood isku direen. Ayaa misna la dareemayaa in aanu Madaxweynaha Somaliland ka indha la’ayn.
La soco wararka iyo faallooyinka xasaasiga ah ee degmada Zaylac.
Cidna uma maqna ceella uma qodna.
This post has been viewed 1367 times.Gaadhsi Dadka:MoreEmailLike this:Like Loading...